အမေ နှင့် အဖေ အသက် ( ၄၅ ) ကျော်လာပြီဆိုရင် ဒါတွေဂရုစိုက်ပေးပါ – Pwintsan
အမေ နှင့် အဖေ အသက် ( ၄၅ ) ကျော်လာပြီဆိုရင် ဒါတွေဂရုစိုက်ပေးပါ
အသက်၄၅ နဲ့ ၆၀ ကြားဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ သတိပြုရန် အသက်ကြီးလေ ပိုဖြစ်လေ။ သတိထားပီး ကြိုတင် ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖိုိ့
(1) အရိုးတွေ ချောင်လာတယ်။ ဒူးနာ တတ်တယ်။ ချဉ်ဆီခမ်းလို့ ဒူးချောင် တတ်တယ်။ ခါးရိုးဆစ် တွေလည်း နာတတ်တယ်။ ချော်လဲ မကျအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဒူးကို ကွေးလိုက် ဆန့်လိုက် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တဖြေးဖြေး နာခြင်း သက်သာလာမယ်။
(2) ကြွက်သားအားမရှိတာ အမျိုးသားက ၃ ပုံပုံ ၁ပုံ နဲ့ အမျိုးသမီးက တဝက်လောက် အဖြစ်များတယ်။ ကြွက်သားဆိုတာ လက်မောင်းကြွက်သားနဲ့ ခြေသလုံးကြွက်သား ၂ မျိုးလုံးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သား အားရှိအောင် လုပ်ပေးကြပါ။
(3) အကြောအဆစ် နာတတ်တယ်။ ဝတဲ့သူများ ပိုပီး ဟိုနာဒီနာ ဖြစ်လွယ်တယ်။ အကြောအားဆေးသောက်ပေးပါ။ ဦးနှောက်အာရုံကြောက ပိုအရေးကြီးတယ်။ အိပ်မပျော် တာများရင် ထိခိုက်သလို ခဏခဏ မေ့လွယ် တတ်တယ်။
(4) အသက်ကြီးလာတဲ့အမျှ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေက တဖြေးဖြေး အားနည်းလာတယ်။ နှလုံး ကျောက်ကပ်, သရက်ရွက်, သည်းခြေ, အသဲ။ ညဖက် ဆီးခဏခဏ သွားတာနဲ့ ဆီးမခိုင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အများအားဖြင့် ယောက်ျားတွေက ၄၅ နှစ်ကျော်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အသက် ၅၀ ကျော်တွေ အဖြစ်များတယ်။
(5) ဝမ်းချူပ်များခြင်း ဝမ်းသွားမကုန်ခြင်းနဲ့အဆီ၊ အပူအစပ် စားများလို့ အူလမ်းကြောင်းမှာ အညစ်ကြေးများရင် အူကင်ဆာ ဖြစ်လွယ်တယ်။ သတိထားကြပါ။
(6 ) နှလုံးမှာပြသာနာ စဖြစ်ရင် အသက်ရှူမဝ၊ ရင်ဘတ် အောင့်ပီး တချက်တချက်နာ၊ ဘယ်ဖက်ပုခုံးထုံ, ကျင်, နာပီး ကျောကုံး အပေါ်ဖက်လည်း ညောင်းပီး အကြောတက်တတ်တယ်။ အိပ်ရာထချိန် ဇက်ကြောတက်တတ် လည်ပင်းညောင်းတတ်တယ်။မျက်လုံး၂ လုံးပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ်စင်းတခု ထင်းကနဲ ပေါ်တတ်တယ်။ နှလုံးမှာ အဓိကကြောက်ရတာ နှလုံးသွေးကြော ၃ ချာင်းရှိတာ အားလုံးပိတ်ရင် စက်တပ်ရပီ။အာ့ကြောင့် နှလုံးသွေးကြော စပိတ်တာနဲ့ အဲလက္ခဏာတွေ ပြင်းထန်ရင် ဆေးရုံမှာ Check သွားလုပ်ပါ။ အဆီတွေလျော့စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ရေများများသောက်ကြပါ။
(7) အသဲ ပြသာနာဖြစ်ရင် ညာဖက် ဗိုက်ခေါက်အပေါ်ဖက် နာကျင်တယ်။ ညာခါးအနောက်ဖက် ညောင်းနာ, ညာဖက် ပုခုံးထုံ ကျင် ညောင်းနာ။ ညအိပ်ချိန် ခြေသလုံးခဏခဏ ကြွက်တက်တတ်တယ်။ အသဲမကောင်းရင် ညကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူး။ပါးစပ်ခါးပီး သွားတိုက်ရင် သွေးထွက်လွယ်တယ်။ အစာမစားချင် ခံတွင်းပျက်ပီး နဲနဲလေးစားတာနဲ့ ဗိုက်ပြည့်လွယ်တယ်။ လမ်းနဲနဲလေး လျှောက်တာနဲ့ ခြေထောက် ညောင်းလွယ်တယ်။ တကိုယ်လုံးနှုံးပီး အားမရှိသလို ခံစားရတယ်။ ခြေမခိုင်ဘဲ ချော်လဲလွယ်တယ် ခြေလိမ်တတ်တယ်။
အရက်သောက် များသူများက လျော့သောက်။အရေပြားယားရင် သတိထားပါ။ အသဲရောဂါ ပို ပြင်းထန်ရင် မျက်နှာအရောင် မွဲခြောက်ခြောက်နဲ့ မဲလာတယ်။ အရေပြား ခြောက်သွေ့လာတယ်။ နှခေါင်းထိပ် နီလာတယ်။အသားတွေ လက်ဖဝါး မျက်လုံး အိမ်တွေ ဝါလာတယ်။ အသဲက စဖြစ်ချိန် တော်ရုံ လက္ခဏာ မပြဘူး။ပြတဲ့ချိန်ဆို သိတာ နောက်ကြတာ များတယ်။ ခုပြောတာက Taiwan တရုတ် ဆေးနည်းပညာရဲ့ ကြည့်နည်းပါ။
(8) ကျောက်ကပ် ပြသာနာ ကတော့ ခါးနာ ကျောနာ၊ မလန်းဆန်းဘူး။ ခြေသလုံး ညောင်းလွယ် အားမရှိ။ အသားရေ ယားယံတတ်တယ်။ ဆီးသွားရင် အမြှုတ်ထတယ်။ ဆီးမခိုင်ဘူး။ ခြေလက် အေးတတ်တယ်။ အိပ်မကောင်းဘူး။ ခဏခဏ နိုးတတ်တယ်။ အထိုင်အထ ကြာကြာ မလုပ်နိုင်ဘူး။ခြေထောက်တွေ ယောင်လာ တတ်တယ်။ ခြေသည်း ခွံတွေ ကြမ်းလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေမရဲ့ ခြေသည်းခွံ အရှည်နှေးလာတယ်။ ကြမ်းပီး ထူလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိူသမားတွေ သတိထားပါ။အမြဲဆေးသောက်ပါ။ ဆီးချိူချိန်ပါ။ ကျောက်ကပ်ပျက်ဆီးရင် သွေးက အပေါ်မတက်နိုင် ရင်လည်း မူးတတ်တယ်။သွေးပေါင် ကျလည်း မူးတတ်တယ်။ ကျောက်ကပ်ကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါ။
(9) သရက်ရွက်မကောင်းရင် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်တယ် လည်ပင်းဇက်ကျောတက်လွယ်။ ဝမ်းချူပ် ဝမ်းလျှော ၂ မျိုးလုံးဖြစ်တတ်တယ်။အစာချေဖျက်မှုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပီးဝမ်းမှန်ရင် ခေါင်းကိုက် ပျောက်လွယ်တယ်။ ခေါင်းကိုက်တိုင်း အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးသိပ် မသောက်ပါနဲ့။အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးကအသောက်များရင်ကျောက်ကပ်နဲ့အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းထိပီး သွေးယို တတ်တယ်။ဝမ်းသွား သွေးပါရင် သတိထားပါ .. သွေးရောင်နီတာက လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို သွေးရောင် မဲညစ်ညစ်ဆို အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရဲ့နံရံပါး (သို့) ပေါက်ပီး ဖြစ်တတ်တယ်။
ကိုယ်ဝမ်းသွားပီးတိုင်း ကိုယ့်ဝမ်းပုံ စံအမြဲကြည့်ပါ။ ရှောကနဲအဖြောင့်လိုက်သွားပီး ဖင်မကပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဆိတ်ချီးတုံးပုံဆို ဝမ်းသွားမစင်ဘူး။ တခါလေ မနက်ရေနွေးသောက်လို့မနက်ပိုင်း ဝေါကနဲ ပန်းတာမျိူးက အပူတွေထုတ်ပစ်တာ ကြောက်စရာမလို။ ကောင်းတယ်။တစ်ရက် လုံး ပန်းရင်တော့ဝမ်းလျှောပီ။ အကောင်းဆုံးက နေ့တိုင်း ဝမ်းမှန်အောင် လုပ်ပါ။ စကားပုံ ရှိတဲ့အတိုင်း ဝမ်းတလုံးကောင်းခေါင်းမခဲ ဆိုတာ ….
(10) အူမကြီးမကောင်းရင် ပါးစပ်ခါးပီး တချိန်လုံး ရေငတ်ရေသောက်ချင် ရေငတ်တတ်တယ်။နှာခေါင်းပိတ်တတ် နှာရည်ယိုတတ်တယ် သွားပိုးမစားဘဲ သွားကိုက် သွားနာဖြစ်တတ်တယ်။ လည်ပင်းရောင် ဖေါင်းတတ်တယ်။ တော်ရုံနဲနဲ လေးတာတောင် အလေးမ မနိုင်ဘူး။ဝမ်းချူပ်ရင်လည်းသွားကိုက်တတ်တယ် အပူများတဲ့သဘော..ဝမ်းချူပ်ရင် ခါးလည်း တခါလေ နာတတ်တယ်။ အူမကြီးက ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ ခုကမ္ဘာမှာ အူမကြီးကင်ဆာက နံပါတ် ၂ စွဲနေတယ်။
လူတွေက အစားတွေ စုံအောင်စားပီး ဝမ်းအဖြစ် အညစ်အကြေး မထုတ်ပစ်လို့ နဲနဲစီ အူနံရံမှာ ကပ်ပီး ကြာတော့ အညစ်ကြေးကနေ ကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်။အစာအိမ်ကနေ အူနံရံပါးပီးအနာဖြစ် ပီးသွေးယိုလည်း ကြာရင် ကင်ဆာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းက ဆက်နေတယ်။ အစာလည်း မခံကြပါနဲ့။ ဗိုက်ဆာရင်စားပါ။အပိန်ကျင့်ပီး အစာမစားတာလည်း မလုပ်ပါနဲ့..အစာအိမ်အချဉ်ဖေါက်ပီး လည်ပြွန်ပေါ် ပြန်တက်တာလည်း အပူအစပ်ရှောင်ပါ။ နဲနဲချင်းနဲ့ အကြိမ်ရေတွက် များများစားပါ။
တစ်ခါထဲ အများကြီးမစားပါနဲ့ တချို့ကျလည်း ဘယ်လောက်စားစား မဝကြဘူး။ ပိန်ပိန်ဘဲ။ အဲမျိုးက ကျန်းမာရင်တော့ ပြသာနာမရှိပါ။သို့သော်ဘယ်လောက် စားစား (or) မစားနိုင်ဘဲ ပိန်ပိန်လာပီး လက်ဆစ်တွေ ငေါထွက်လာရင် ဂေါက်ရောဂါနဲ့ အစာအိမ်က စုပ်ယူအား မကောင်းတော့ဘူး ဗီတာမင် မယူနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါမျိုးဆို ဆရာဝန်သေချာပြပါ။ ဂေါက် ရောဂါ ရှိရင် beer နဲ့မတည့်ပါ။ရေချိုးရင်မချော်တတ်တဲ့ ဘိနပ်စီးပီး ချိုးပါ။ ခြေထောက်ကျောက်ပြား တိုက်ရိုက်ထိ အေးရင်လည်းအကြောချဉ် ကိုက်တတ်တယ်။ ချော်လဲကျလွယ်တယ်။ အသက်ကြီးရင် အရိုးအဆစ်တွေက အားနည်းညနေပီ။ အရိုးအားဆေးစားပါ ချော်လဲ မကျပါစေနဲ့။
အမေ နှငျ့ အဖေ အသကျ ( ၄၅ ) ကြျောလာပွီဆိုရငျ ဒါတှဂေရုစိုကျပေးပါ
အသကျ၄၅ နဲ့ ၆၀ ကွားဖွဈတတျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာမြား သတိပွုရနျ အသကျကွီးလေ ပိုဖွဈလေ။ သတိထားပီး ကွိုတငျ ကာကှယျကုသနိုငျဖိုိ့
(1) အရိုးတှေ ခြောငျလာတယျ။ ဒူးနာ တတျတယျ။ ခဉျြဆီခမျးလို့ ဒူးခြောငျ တတျတယျ။ ခါးရိုးဆဈ တှလေညျး နာတတျတယျ။ ခြျောလဲ မကအြောငျ ဂရုစိုကျပါ။ ဒူးကို ကှေးလိုကျ ဆနျ့လိုကျ လုပျပေးခွငျးဖွငျ့ တဖွေးဖွေး နာခွငျး သကျသာလာမယျ။
(2) ကွှကျသားအားမရှိတာ အမြိုးသားက ၃ ပုံပုံ ၁ပုံ နဲ့ အမြိုးသမီးက တဝကျလောကျ အဖွဈမြားတယျ။ ကွှကျသားဆိုတာ လကျမောငျးကွှကျသားနဲ့ ခွသေလုံးကွှကျသား ၂ မြိုးလုံးပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျခွငျးဖွငျ့ ကွှကျသား အားရှိအောငျ လုပျပေးကွပါ။
(3) အကွောအဆဈ နာတတျတယျ။ ဝတဲ့သူမြား ပိုပီး ဟိုနာဒီနာ ဖွဈလှယျတယျ။ အကွောအားဆေးသောကျပေးပါ။ ဦးနှောကျအာရုံကွောက ပိုအရေးကွီးတယျ။ အိပျမပြျော တာမြားရငျ ထိခိုကျသလို ခဏခဏ မလှေ့ယျ တတျတယျ။
(4) အသကျကွီးလာတဲ့အမြှ ကိုယျတှငျးကလီစာတှကေ တဖွေးဖွေး အားနညျးလာတယျ။ နှလုံး ကြောကျကပျ, သရကျရှကျ, သညျးခွေ, အသဲ။ ညဖကျ ဆီးခဏခဏ သှားတာနဲ့ ဆီးမခိုငျတာတှဖွေဈတတျတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ ယောကျြားတှကေ ၄၅ နှဈကြျောနဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ အသကျ ၅၀ ကြျောတှေ အဖွဈမြားတယျ။
(5) ဝမျးခြူပျမြားခွငျး ဝမျးသှားမကုနျခွငျးနဲ့အဆီ၊ အပူအစပျ စားမြားလို့ အူလမျးကွောငျးမှာ အညဈကွေးမြားရငျ အူကငျဆာ ဖွဈလှယျတယျ။ သတိထားကွပါ။
(6 ) နှလုံးမှာပွသာနာ စဖွဈရငျ အသကျရှူမဝ၊ ရငျဘတျ အောငျ့ပီး တခကျြတခကျြနာ၊ ဘယျဖကျပုခုံးထုံ, ကငျြ, နာပီး ကြောကုံး အပျေါဖကျလညျး ညောငျးပီး အကွောတကျတတျတယျ။ အိပျရာထခြိနျ ဇကျကွောတကျတတျ လညျပငျးညောငျးတတျတယျ။မကျြလုံး၂ လုံးပျေါ ကနျ့လနျ့ဖွတျစငျးတခု ထငျးကနဲ ပျေါတတျတယျ။ နှလုံးမှာ အဓိကကွောကျရတာ နှလုံးသှေးကွော ၃ ခြာငျးရှိတာ အားလုံးပိတျရငျ စကျတပျရပီ။အာ့ကွောငျ့ နှလုံးသှေးကွော စပိတျတာနဲ့ အဲလက်ခဏာတှေ ပွငျးထနျရငျ ဆေးရုံမှာ Check သှားလုပျပါ။ အဆီတှလြေော့စား၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ၊ ရမြေားမြားသောကျကွပါ။
(7) အသဲ ပွသာနာဖွဈရငျ ညာဖကျ ဗိုကျခေါကျအပျေါဖကျ နာကငျြတယျ။ ညာခါးအနောကျဖကျ ညောငျးနာ, ညာဖကျ ပုခုံးထုံ ကငျြ ညောငျးနာ။ ညအိပျခြိနျ ခွသေလုံးခဏခဏ ကွှကျတကျတတျတယျ။ အသဲမကောငျးရငျ ညကောငျးကောငျး အိပျမပြျောဘူး။ပါးစပျခါးပီး သှားတိုကျရငျ သှေးထှကျလှယျတယျ။ အစာမစားခငျြ ခံတှငျးပကျြပီး နဲနဲလေးစားတာနဲ့ ဗိုကျပွညျ့လှယျတယျ။ လမျးနဲနဲလေး လြှောကျတာနဲ့ ခွထေောကျ ညောငျးလှယျတယျ။ တကိုယျလုံးနှုံးပီး အားမရှိသလို ခံစားရတယျ။ ခွမေခိုငျဘဲ ခြျောလဲလှယျတယျ ခွလေိမျတတျတယျ။
အရကျသောကျ မြားသူမြားက လြော့သောကျ။အရပွေားယားရငျ သတိထားပါ။ အသဲရောဂါ ပို ပွငျးထနျရငျ မကျြနှာအရောငျ မှဲခွောကျခွောကျနဲ့ မဲလာတယျ။ အရပွေား ခွောကျသှလေ့ာတယျ။ နှခေါငျးထိပျ နီလာတယျ။အသားတှေ လကျဖဝါး မကျြလုံး အိမျတှေ ဝါလာတယျ။ အသဲက စဖွဈခြိနျ တျောရုံ လက်ခဏာ မပွဘူး။ပွတဲ့ခြိနျဆို သိတာ နောကျကွတာ မြားတယျ။ ခုပွောတာက Taiwan တရုတျ ဆေးနညျးပညာရဲ့ ကွညျ့နညျးပါ။
(8) ကြောကျကပျ ပွသာနာ ကတော့ ခါးနာ ကြောနာ၊ မလနျးဆနျးဘူး။ ခွသေလုံး ညောငျးလှယျ အားမရှိ။ အသားရေ ယားယံတတျတယျ။ ဆီးသှားရငျ အမွှုတျထတယျ။ ဆီးမခိုငျဘူး။ ခွလေကျ အေးတတျတယျ။ အိပျမကောငျးဘူး။ ခဏခဏ နိုးတတျတယျ။ အထိုငျအထ ကွာကွာ မလုပျနိုငျဘူး။ခွထေောကျတှေ ယောငျလာ တတျတယျ။ ခွသေညျး ခှံတှေ ကွမျးလာတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခွမေရဲ့ ခွသေညျးခှံ အရှညျနှေးလာတယျ။ ကွမျးပီး ထူလာတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆီးခြိူသမားတှေ သတိထားပါ။အမွဲဆေးသောကျပါ။ ဆီးခြိူခြိနျပါ။ ကြောကျကပျပကျြဆီးရငျ သှေးက အပျေါမတကျနိုငျ ရငျလညျး မူးတတျတယျ။သှေးပေါငျ ကလြညျး မူးတတျတယျ။ ကြောကျကပျကို အထူးဂရုစိုကျကွပါ။
(9) သရကျရှကျမကောငျးရငျ ခေါငျးတခွမျးကိုကျတတျတယျ လညျပငျးဇကျကြောတကျလှယျ။ ဝမျးခြူပျ ဝမျးလြှော ၂ မြိုးလုံးဖွဈတတျတယျ။အစာခဖြေကျြမှုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျပီးဝမျးမှနျရငျ ခေါငျးကိုကျ ပြောကျလှယျတယျ။ ခေါငျးကိုကျတိုငျး အကိုကျခဲပြောကျဆေးသိပျ မသောကျပါနဲ့။အကိုကျခဲပြောကျဆေးကအသောကျမြားရငျကြောကျကပျနဲ့အစာအိမျ အူလမျးကွောငျးထိပီး သှေးယို တတျတယျ။ဝမျးသှား သှေးပါရငျ သတိထားပါ .. သှေးရောငျနီတာက လိပျခေါငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျသလို သှေးရောငျ မဲညဈညဈဆို အစာအိမျအူလမျးကွောငျးရဲ့နံရံပါး (သို့) ပေါကျပီး ဖွဈတတျတယျ။
ကိုယျဝမျးသှားပီးတိုငျး ကိုယျ့ဝမျးပုံ စံအမွဲကွညျ့ပါ။ ရှောကနဲအဖွောငျ့လိုကျသှားပီး ဖငျမကပျရငျ အကောငျးဆုံးပါ။ပွတျတောငျးပွတျတောငျး ဆိတျခြီးတုံးပုံဆို ဝမျးသှားမစငျဘူး။ တခါလေ မနကျရနှေေးသောကျလို့မနကျပိုငျး ဝေါကနဲ ပနျးတာမြိူးက အပူတှထေုတျပဈတာ ကွောကျစရာမလို။ ကောငျးတယျ။တဈရကျ လုံး ပနျးရငျတော့ဝမျးလြှောပီ။ အကောငျးဆုံးက နတေို့ငျး ဝမျးမှနျအောငျ လုပျပါ။ စကားပုံ ရှိတဲ့အတိုငျး ဝမျးတလုံးကောငျးခေါငျးမခဲ ဆိုတာ ….
(10) အူမကွီးမကောငျးရငျ ပါးစပျခါးပီး တခြိနျလုံး ရငေတျရသေောကျခငျြ ရငေတျတတျတယျ။နှာခေါငျးပိတျတတျ နှာရညျယိုတတျတယျ သှားပိုးမစားဘဲ သှားကိုကျ သှားနာဖွဈတတျတယျ။ လညျပငျးရောငျ ဖေါငျးတတျတယျ။ တျောရုံနဲနဲ လေးတာတောငျ အလေးမ မနိုငျဘူး။ဝမျးခြူပျရငျလညျးသှားကိုကျတတျတယျ အပူမြားတဲ့သဘော..ဝမျးခြူပျရငျ ခါးလညျး တခါလေ နာတတျတယျ။ အူမကွီးက ဝမျးနဲ့ဆိုငျတယျ။ ခုကမ်ဘာမှာ အူမကွီးကငျဆာက နံပါတျ ၂ စှဲနတေယျ။
လူတှကေ အစားတှေ စုံအောငျစားပီး ဝမျးအဖွဈ အညဈအကွေး မထုတျပဈလို့ နဲနဲစီ အူနံရံမှာ ကပျပီး ကွာတော့ အညဈကွေးကနေ ကငျဆာဖွဈသှားတယျ။အစာအိမျကနေ အူနံရံပါးပီးအနာဖွဈ ပီးသှေးယိုလညျး ကွာရငျ ကငျဆာ ဖွဈတတျတယျ။ အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးက ဆကျနတေယျ။ အစာလညျး မခံကွပါနဲ့။ ဗိုကျဆာရငျစားပါ။အပိနျကငျြ့ပီး အစာမစားတာလညျး မလုပျပါနဲ့..အစာအိမျအခဉျြဖေါကျပီး လညျပွှနျပျေါ ပွနျတကျတာလညျး အပူအစပျရှောငျပါ။ နဲနဲခငျြးနဲ့ အကွိမျရတှေကျ မြားမြားစားပါ။
တဈခါထဲ အမြားကွီးမစားပါနဲ့ တခြို့ကလြညျး ဘယျလောကျစားစား မဝကွဘူး။ ပိနျပိနျဘဲ။ အဲမြိုးက ကနျြးမာရငျတော့ ပွသာနာမရှိပါ။သို့သျောဘယျလောကျ စားစား (or) မစားနိုငျဘဲ ပိနျပိနျလာပီး လကျဆဈတှေ ငေါထှကျလာရငျ ဂေါကျရောဂါနဲ့ အစာအိမျက စုပျယူအား မကောငျးတော့ဘူး ဗီတာမငျ မယူနိုငျတော့ဘူး။ အဲဒါမြိုးဆို ဆရာဝနျသခြောပွပါ။ ဂေါကျ ရောဂါ ရှိရငျ beer နဲ့မတညျ့ပါ။ရခြေိုးရငျမခြျောတတျတဲ့ ဘိနပျစီးပီး ခြိုးပါ။ ခွထေောကျကြောကျပွား တိုကျရိုကျထိ အေးရငျလညျးအကွောခဉျြ ကိုကျတတျတယျ။ ခြျောလဲကလြှယျတယျ။ အသကျကွီးရငျ အရိုးအဆဈတှကေ အားနညျးညနပေီ။ အရိုးအားဆေးစားပါ ခြျောလဲ မကပြါစနေဲ့။